Lasa Nivadika Herisetra Ny Fifandirana Momba Ny Rano Teo Amin’ireo Fanjakana Roa Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2016 1:14 GMT
Sarintany mampiseho ny làlan'ny renirano Cauvery (Kaveri) mamakivaky ireo fanjakan'i Karnataka sy Tamil Nadu. Sary avy tamin'i NaanCoder tamin'ny Wikimedia commons. CC BY SA 3.0
Efa niantomboka hatramin'ny tapatapaky ny taonjato Faha-19 ny ady teo amin'ireo fanjakana Indiana ao Karnataka sy Tamil Nadu mikasika ny fomba hizaràna ny rano avy amin'ny renirano Kaveri (fantatra eo an-toerana hoe Cauvery). Vao haingana anefa, lasa nahery setra ilay toe-drahdraha, taminà fomba tsy mbola nisy tahaka izany—hany ka nandray nanisy ora farany azo hivezivezena ao Bangalore renivohitry ny tanànan'i Karnataka ireo manampahefana.
Taorian'ny fitokonana indray andro maninjitra tao Bangalore, ny 9 Septambra, niafara tamin'ny fahafatesanà mpanao fihetsiketsehana roa ireo fihetsiketsehana niteraka fahapotehana tsy nampoizina tamin'ireo faritra maro tao an-tanàna. Ny iray maty voatifitry ny polisy, ary ny iray hafa maty taorian'ny fiezahany handositra ny kibay fandoran'ny polisy, raha nanao hetsi-panoherana nandritra ny ora tsy azo ivezivezena, izay fantatra tamin'ny hoe Andalana 144 amin'ny lalàmpanorenana Indiana.
Ireo sasany naratra, fivarotana maro sy ireo fiara am-polony no simba na nodorana, tsy lazaina intsony ireo fiara fitateram-bahoaka teo amin'ny 30 – 45 an'ny faritra Tamil Nadu nisy nandoro.
If you set fire to things to protest the scarcity of water, then the protest goes from agitation to irony. #Cauvery pic.twitter.com/9GFqCnnNVi
— $ir $ri Aditya Magal (@jhunjhunwala) September 12, 2016
Raha toa ianao mandoro zavatra mba hanoherana ny tsy fahampian-drano, dia lasa eso miala amin'ny fikorontanana ilay hetsi-panoherana.
Hatreto, mpanao hetsi-panoherana miisa 350 no nosamborina nampangaina tamin'ilay herisetra sy fanimbàna fananam-bahoaka ary fananana manokana. Polisy 700 teo ho eo, mpandrava korontana, no nanjohy ireo hery tsy miankina miisa 1.700 ny Alatsinainy Faha-13. Lasa renivohitry ny informatikan'i India i Bangalore, miaraka amin'ireo orinasa Mpanambola 500 isa, efa ho izy rehetra, mitoetra ao amin'ny tanàna, nanisa ny fatiantoka ho eo amin'ny manodidina ny 250 lavitrisa ropia(eo amin'ny 3,7 lavitrisa dolara Amerikana) ny Fikambanan'ny Tranoben'ny Varotry ao India.
Nirongatra ny herisetra taorian'ny nangatahan'ny Fitsarana an-Tampony Indiana an’ i Karnataka hanome isanandro rano 15.000 kioba/segondra avy ao amin'ireo fitahirizan-dranony ho an'i Tamil Nadu mandritry ny 10 andro. Na ny zavamisy aza dia hoe rano 36 lavitrisa kioba voatahiry ao anatin'ireo sinibendranony miisa efatra ananan'i Karnataka miohatra amin'ny 49 lavitrisa voatahiry ao anatin'ireo sinibe roa ao Tamil Nadu. Anatin'rei hetsi-bahoaka malaza, nangataka tamin'ny fitsaràna ny governemantan'i Karnataka mba hamerina hijery ny fanapahana navoakany. Nolavin'ny fitsaràna ilay fitarainana, saingy lnahenany ho 12.000 kioba ilay fatra isan-tsegondra.
Ireo sasany nilaza fa vao mainka nanaratsy ny olana lalindalina kokoa ny fahitalavitra sy ny media sosialy tamin'ny fanaparitahany ireo tsahotsaho, sarin'ny korontana ary fitenenana feno fankahalàna. Nangatahan'ny Minisitry ny Fampahalalàm-baovao sy ny Haino aman-jery ao India ireo fantsom-pahitalavitra mba hampiato ny famerimberenana ireo vaovao ‘mihantsy sy mandranitra‘.
Such tremendous loss to life, property, business on Cauvery sharing! Will politicians & media be booked for inciting, or this too will pass?
— गीतिका (@ggiittiikkaa) September 13, 2016
Fahavoazana goavana tahàka izany amin'ny fiainana, fananana, fandraharahàna, noho ny fizaràna ny Cauvery! Hibaby ny fandranitany ve ireo mpanao politika sy media, sa handalo fotsiny koa io?
Raha jerena amin'ny tantaran'ny ady efa ela nisy teo amin'ireo fanjakana roa, ary ny vokadratsin'io amin'ny vahoakan'ireo fanjakana roa, maro no nanandrana nandalina ireo anton'ny ady. Nizara ny tantara sasany i A Arun Prasath, mpampiasa ao amin'ny fanontaniana sy valiny ao amin'ny vohikala Quora:
Fiandohàny ary fidiran'ny resaka politika:
Efa nialohan'ny fiafaran'ny vanimpotoana Britanika (1980) ny adihevitra momba ny fizaràna ny ranon'i Cauvery, izay tokony nifanarahan'ny fanjakana tantanàn'ny zanaka mpanjaka Mysore sy ny fanjakana Chennai (izay teo ambanin'ny Raj Britanika) ny fizaràna azy. Nirongatra ilay korontana raha, tamin'ny taona 1910, samy nanao drafitra amin'ny fanamboarana tohodrano ireo fanjakana roa tonta. Nanelanelana tamin'ny fandaminana ny olana ny Britanika ary namaritra ny anjaran'ny andaniny sy ankilany amin'ny fizaràna ny rano, ary hoe tokony ho an'ireto farany ny fitantanana ny faritry ny tany azo ambolena. Nisy fifanarahana nampisy resabe tokoa vita ny taona 1924, ary natao hitohy mandritra ny 50 taona manaraka.
Nohamafisian'i Girish Nikam, mpitoraka blaogy iray hafa tao amin'ny vavahadin-tserasera Indiana Wire, fa fifanarahana tsy ara-drariny no azon'i Karnataka hatramin'ny taonjato Faha-10:
Tena hita ho tsy rariny lehibe tokoa io ho an'i Karnataka, tsy isalasalàna. Ahoana no nitrangan'izany? Mitoetra ao anatin'ny tantara ny valin'izany, izay tsy ho afaka averintsika soratana indray izao. Niseho izany satria ireo mpitondra sahala amin'ireo Cholas, izay nifehy ny ampahan'ny firenena, izay lasa Tamil Nadu ankehitriny, izay ikorianan'ny renirano, dia nitsinjo lavitra nihevitra hanamboatra siniben-drano sy tohodrano tamin'ny taonjato fahafolo sy taty aoriana, mba hampiasa ilay rano amin'ny fanondrahana. Teo ankilany, ny taona 1934 vao nanamboatra ny siniben-dranony lehibe, K.R.Sagar, ireo mpifehy an'i Mysore.
[…] Miaraka amin'ny fitambaran'ny tombontsoa ara-tantara afangaro amin'ny fitsinjovana ny hoavy, sy izay fantatra ho zon'izay efa ela nampiasa azy, migoka anjara betsaka kokoa mazava ho azy i Tamil Nadu. Tsy tokony ho ambetintenin'iza na iza mihitsy hoe tokony handà izany ankehitriny ireo izay nigoka ny tombontsoa tamin'ny rano nandritra izay taona lasa izay. Fa kosa raha mandalo amin'ilay fifanarahana ny taona 1924, lasa nidina ho 57% amin'izao ny anjaran'i Tamil Nadu, izay maherin'ny 80% teo aloha, ary ny an'i Karnataka, izay teo amin'ny 16%, lasa niakatra 37% amin'izao.
Nanolotra sasantsasany amin'izay mety ho vahaolana amin'io olana io i Sunil NG tao amin'ny lahatsoratra Facebook, indrindra ny fanenana ny fianteherana amin'ny rano. Nanao tsoakevitra toy izao izy:
Na hoe tena fanamby iray tokoa aza ny olan'ny ranon'ny renirano Kaveri, afaka vahàna io amin'ny alalan'ny fisian'ny teknolojia sy fanadihadiana lalina. Kanefa, mampitombo ny fahasarotan'ny fitondràna fanovàna amin'ilay rafitra ny fidikidiran'ny politika amin'ilay olana. Samy mampiasa ilay olana daholo ireo antoko politika any amin'ireo fanjakana andaniny sy ankilany mba hataony karatra hamitahana hahazoana isam-bato bebe kokoa. Raha tena te-hitady vahaolana mahomby tokoa amin'io olana io, tena zava-dehibe tokoa ny fialàn'ny politika lavitra amin'ny olan'ny ranon'ny renirano Kaveri.
Satria sy andaniny sy ankilany samy manana mpamboly sy mpiompy an-hetsiny sy olon-tsotra maro hafa izay miankina be amin'ny rano, samy manan-danja avokoa ireo zavatra lazain'ny avy amin'ny ankolafy roa. Fa vao mainka nanaratsy kokoa ny olana fotsiny ny herisetra, ary nanasarotra kokoa ny fiainan'ny olona maro, sady zara raha mamela toerana kely ho an'ireo fanjakana roa hanao fifanarahana ifaneken'ny roa tonta.